Idacadda SR iyo Midda Caalamiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Idacadda SR iyo Midda Caalamiga
Publicerat onsdag 3 november 2010 kl 09.11
Idaacadda Caalamiga ah ee Raadiyaha Iswiidhen waa moowjad ku hadasha luuqado kala duwan hoowsheeduna tahay sidii war-bixin loogu gaarsiin lahaa dhacdooyinka dalka.
Idaacadda Caalamiga ah ayaa warar iyo warbixinno kaga baahisa siddeed luuqadood raadiyaha iyo bogga internetka.
Barnaamijyada ku baxa afafka ingiriisiga, carabiga, kurdiga, peerishiyanka iyo soomaaliga ayaa ka baaha maalinnimadii moowjadda P2, gaadhanna dalka dhammaantii, halka magaalada Istockholm lagu baahiyo hirarka 89,6. Barnaamijyada idaacadda ayaa ku aadan gaar ahaan bulshada ajaaniibta ee dalka ku cusub si loogu sahlo iney la socdaan dhacdooyinka dalka ka dhacaya iyo sidey ugu sahli lahayd nolol-maalmeedkooda.
Barnaamijka qoowmiyadda laga tirada badan yahay ee Roomiga ayaa laga baahiyaa maalinnimadii moowjadda P2, halka ey reer Istockhlm-ina ka dhageeysan karaan hirarka 89,6, iyadoona loogu talo galay sidii loogu adkeeyn lahaa dhaqanka iyo luuqadda qoowmiyadda Roomiga ee ku dhaqan dalkan Iswiidhen. Dhammaan luuqadaha ka baaha idaacadda Caalamiga ah ee Raadiyaha Iswiidhen ayaa sidoo kale leh bogag internetka ee wararka lagu daabaco, halka luuqadda ingiriisugu hoowl-gasho toddobada maalmood ee toddobaadka.
Dhageeysteyaasha ku dhaqan dalka dibaddiisa ee xiiseeya barnaamijyada ka baxa idaacadda ayey idaacadda (Radio Sweden) ugu talo-gashay afafka ingiriisiga, jarmalka iyo ruushka wararka bogga internetka iyo qaabka pod-ka ee la soo dejisan karo. Barnaamijyada idaacadda Caalamiga ah ee ku baxa luuqadda ingiriisiga iyo warar kale ee fara badan lana xiriira dalka dhammaantii ayaa lagu baahin doonaa aaladda saletiitka. War-bixinno la xiriira wakhtiyada iyo moowjadaha laga dhageeysan karo waxaad ka daalacn kartaan bogga internetka ee waaxda luuqadda ingiriisiga.